Alaabooyinka Daawooyinka Dhameystiran
NINGBO FEIYUE TRADING TRADING CO.LTD
Waa maxay heerka alaabta shirkaddaadu?
Wershadaha dawooyinka, heerar adag ayaa jira si loo hubiyo isticmaalka amaan ahaanta iyo soo saarista dawooyinka. Wax soo saar kasta oo dawooyinka ah waxaa loo sameeyaa iyada oo loo eegayo tilmaamo taxane ah oo ku taxan dawooyin gaar ah oo loo yaqaan 'pharmacopoeia' oo ay daabaceen mid ka mid ah waddamo dhawr ah. Shirkadda 'Sundayent' waxay soo saartaa dhammaan alaabada dawooyinka iyadoo loo eegayo sida ugu badan ee ilaa hadda loo yaqaan 'pharmacopoeia' oo ah alaabada oo dhan.
Marka daawada Monograph aan la heli karin, heerka uu adeegsaday soo saaraha ayaa la beddalayaa markii ay ku habboon tahay.
Imtixaannada waxaa loo qabtaa iyada oo la raacayo nooca caalamiga ah ee la oggolaaday iyo nooca ugu dambeeya ee heerarka sida EP, BP, USP iyo sidoo kale DIN, EN iyo ISO.
Sidee shirkaddaadu u qabataa QC?
FYMEDICAL kaliya waxay soo saartaa alaabada laga helo tas-hiilaadkii buuxiyay WHO iyo shuruudaha GMP ee maxalliga ah.
Nidaamkayaga Xakamaynta Tayada (QC) wuxuu taageeraa wax qabadyada maalinlaha ah ee la xiriira waxsoosaarka saxda ah, xirxirida iyo xakameynta gudaha iyo sii deynta badeecooyinka, dhammaantoodna waa in la fuliyaa ka hor siideynta.
Shuruudaheena laxiriira tayada tayada waxsoosaarka dawadaheena waxay leeyihiin hal ujeedo: in loo adeego baahiyaha caafimaad iyo daryeelka macaamilka dhamaadka. Masuuliyadda bulsho ee fog fog ee noocan oo kale ah waxay nagu kalifaysaa waajibaad anshaxeed oo isku mid ah innaga oo saaran suuqa suuqyada ee isku xirnaan la'aanta iyo nabadgelyada. Macaamiisheenna waa lagu hubin karaa inay macaamiishooda siiyaan alaab tayo leh.
Sidee loo bilaabayaa amarrada ama bixinta lacagaha?
Waad u diri kartaa dalabkaaga wax iibsiga, ama waxaad kaliya ugu soo diri kartaa xaqiijin fudud email ama Maareeyaha Ganacsiga, waxaanan kuu soo diri doonaa Proforma Invoice oo leh faahfaahinta bangigaaga si aad u xaqiijiso, ama waxaan khad ka samayn karnaa alibaba. ka dib waad bixin kartaa si ku habboon.
Sidee loo xaqiijiyaa tayada sheyga ka hor intaadan dalban amarada?
Waxaan leenahay COA nooc kasta oo ka mid ah wuu fiicanyahay. Waxaad sidoo kale heli kartaa muunado bilaash ah oo loogu talagalay badeecooyinka qaarkood, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad bixiso qiimaha rarka ama aad u soo diyaarsato boosteejo noo soo dirto oo samballada qaado. Waxaad noo soo diri kartaa faahfaahinta badeecadaada iyo codsiyadaada, waxaan soosaaraynaa alaabooyinka si waafaqsan codsiyadaada.
Waa maxay MOQ-kaaga?
Alaabada qiimaha sare leh, MOQ-gayagu wuxuu ka bilowdaa 1box.
Miyuu jaban yahay?
Haa, tiro badan, waxaan had iyo jeer taageernaa qiimo fiican.
Sideed ula dhaqantaa cabashada tayada leh?
Marka ugu horeysa, xakamayntayada tayada ayaa yareyn doonta dhibaatada tayada ilaa u dhow eber. Haddii ay jirto dhibaato tayadeysan oo ay sababtay annaga, waxaan kuu soo diri doonnaa alaabo bilaash ah si loo beddelo ama dib loogu celiyo khasaarahaaga.
Sidee nalaula soo xiriirayaa?
Waad dooran kartaa waxyaabaha aad xiiseyneyso oo aad noo soo diri karto baaritaan.
Si toos ah ayaad u garaaci kartaa taleefankeena, waxaad heli doontaa jawaabtayada.
Noo soo dir E-mayl.
xiriirada: Blacky Wong
ADD: No.575 South Tiantong South, Degmada Yinzhou, Ningbo, Shiinaha
2020 XNUMX Ningbo Feiyue Trading Co.ltd. Dhamaan xuquuqaha ayaa ilaaliya